Land Trust Service Yekuva Nezvivakwa
Chii chinonzi Land Trust?
Kuvimba kwenyika igwaro ratinoita iro rinokutendera kuti ubate chivakwa pachivande kuti zita rako risaratidzike pazita muzvinyorwa zveveruzhinji.
Ngatiti iwe unopinda mukuparara kwemotokari. Une $ 1 mil yeinishuwarenzi. Asi iwe unorova stock broker & unokwidzwa kumamirioni emadhora matatu. Kana iwe uine yako imba uye yekudyara zvivakwa muzita rako wega, gweta rinokumhan'arira iwe unowana zviri nyore imba yako uye chero zvimwe zvivakwa mune yeruzhinji zvinyorwa. Kana iwe uine imba, inoratidza kumwe kugadzikana kwezvemari uye gweta rinenge riine mukana wakakura wekupa mhosva.
Gweta rinopikisa rinogona kubva raita kuti shefu vasimudze pamberi peimba yako, vachingobaya pamusuwo wako iwe uchidya kudya kwemanheru uye vokupa mhosva yako pamberi pevavakidzani vako vese. Nekudaro, kana iwe uine imba yako muvhu kuvimbika, yako muridzi yakavanzwa. Yako ivhu rekuvimba harifanirwe kumisikidzwa muzvinyorwa zveruzhinji. Inoita kuti chako kuve chako zvakavanzika. Hapana munhu anofanirwa kuziva kuti imba yako ndeyako kunze kwako.
Iyo nyika trust ine zvinhu zvina: Nhamba 1 ndiyo yekugara. Ndizvozvo iwe nekuti ndiwe une mumwe munhu gadzira kuvimba. Nhamba 2 ndiye mutirastii. Iyo trust inoganhurira kutonga kweTrasti pasi pemitemo yetrust. Kune trastii, isu tinowanzo gadzira iyo Wyoming LLC kune yedu mutengi. Isu tinowedzera sevhisi yekusarudzika kune iyo LLC kuitira kuti zita remutengi risaoneke pachena. Wakavimbika wetrust trust anogona kuve hanzvadzi kana mukuwasha, shamwari inovimbwa kana nhengo yemhuri. Kuti uwedzere kuvanzika kwako, zvakanaka kusarudza kambani kana mumwe munhu asina zita rako rekupedzisira. Matirastii ese anoda mutirastii asi nerudzi urwu rwekuvimba, iyo trust inoraira yavo nhanho yekutonga. Nhamba 3 ndiye anowana. Ndiye iye anogamuchira zvese zvakanaka zvechivimbo. Ndiye iwe (kana mumwe kana vamwe vanhu kana makambani aunosarudza).
Iyo yekugadzirisa inogona kuve neakawanda eanodzora kutonga. Iyo yekugara inogona kunongedza kana imba yatengwa uye inotengeswa. Uye zvakare, iyo yekugara ndiyo inogona kugadzirisa iyo imba kana inogona kutora mari yekurenda kubva kune ekudyara zvivakwa. Chekupedzisira, nhamba 4 ndiyo corpus yetrust. Iyo corpus ndiro guta guru kana mukuru (zvinhu zvekukosha) mukati mekuvimba.
Zvakanakira Land Land
Chinhu chikuru ndechekuti ese epamusoro mutero mabhenefiti anoramba akangwara. Uine chivimbo chakarongeka zvakanaka, paunotengesa imba yako mabhenefiti emitero anosara. Kana iwe wakagara mumusha kwemaviri kubva mashanu apfuura makore haufanire kubhadhara mutero pane iyo purofiti paunotengesa inosvika kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemunhu asina kuroora kana madhora mazana mashanu ezviuru kune vakaroora, kana akagadzirwa zvakanaka.
Izvo iwe zvawakawana ndiko kuvanzika kwevaridzi.
Ko Mukweretesi Vachatii?
Iyo Garn - St Germain Depository Institutions Act ya1982 inonyatso bvumidza munhu kuisa chivakwa chake mumhando yetrust yenyika iyo yatino tarisa pasina kukonzeresa chirevo chekutengesa. Izvi zvinoreva kuti munhu anogona kuendesa yakaiswa mari kune yakavakirwa chivimbo pasina kupindira kubva kubhangi. Izvi ndizvo zvinoitika chero mukweretesi achiramba ari mubatsiri, chivakwa chacho chine dzimba dzinosvikira shanu dzekugara, chivimbo chinodzoserwa uye hachiendese kodzero dzekugara kune vamwe.
Garn-St Germain Dhipatimendi
Institutions Mutemo wa1982
TITLE 12> CHITSAUKO 13 § 1701j – 3
§ 1701j-3. Kuregererwa kwakakodzera-pakutengesa zvinorambidzwa
(d) Kuregererwa kwekutsanangurwa kuchinjiswa kana kupihwa
Nekuremekedza chikwereti chaicho cheimba chakachengetedzwa nerevien pachivako chechokwadi chivakwa chine dzimba dzinopfuura isingasviki mashanu, kusanganisira lien pachivako chakapihwa pekugara mukoporasi imba yemubatanidzwa, kana pamba pekugara inogadzirwa, mukweretesi haakwanise shandisa sarudzo yayo zvichienderana nechikamu che-chiri-kutengeswa pamusoro-
(8) kuchinjirwa mukati mevivos trust umo mukweretesi ari uye anoramba ari mubatsiri uye isinginei nekuchinjirwa kwekodzero dzekugara mumba. …
(inter vivos trust = Chivimbo chakagadzirwa panguva yehupenyu hweanogara. Anogadzirisa ndiye ane kuvimba kwakagadzirwa. Rudzi rwe Land trust kwarwunoreva irwo inter vivos trust.)
Ndekupi Kwandinogona Kushandisa Land Trust?
Vanhu vanoshandisa matirastiki epasi mumatunhu ese makumi mashanu. Mimwe mirawo yenyika haitaure nezve chivimbo chenyika asi vanhu vanoishandisa mumatunhu ese. Vamwe vanhu vanoita chikanganiso chekuti, "Matirastii epasi haana kutaurwa mumitemo yenyika yangu, saka haasi pamutemo." Zvakanaka, iri kupi mitemo inoti mumwe munhu anogona kupfeka shangu dzvuku? Kutsenhama pasofa? Imwai kubva kune yakakomberedzwa mashanga? Kwete zvese zvatinoita zvinoenderana nemabhuku emutemo. Mutemo wakajairika, kupesana ne mutemo, ndiwo madudziro akaitwa mutemo uye mamwe maitiro akajairika uye akagamuchirwa kazhinji mumakore apfuura. Matirasto chikamu chemutemo wakajairika uyo wakagamuchirwa kazhinji kwemazana emakore kunze kwekunge paine mitemo yepamutemo inopesana navo. Iko hakuna mitemo, sekunyorwa uku, mune chero makumi mashanu eUS anoti zvinopesana nekushandiswa kwematirastii epasi.
Real Estate Mhosva Dzenyaya
Mumwe wevatengi vedu aive nemuvakidzani achifamba pamberi peyadhi yeimwe imba yavo. Akatyoka gumbo, akarwara ropa ndokufa. Vakamhan'arirwa kune zvese zvavaive nazvo nenzira kupfuura zvaigona kufukidzwa neinishuwarenzi. Dai ivo vakaita chinhu chimwe chete varidzi venzvimbo mune chivimbo chevhu icho chingadai chisina kuitika. Hazvirevi kuti kuvimba kunobvisa chisungo. Izvo ndezvekuti, maitiro atinoita maratidziro ako epasirese, hapana munhu anofanira kuziva kuti iwe unofarira chivakwa-chinobata-chivimbo asi IMI. Nekudaro, zvakavanzika kuti gweta rinomhan'arira ani. Ivo vanofanirwa kushandisa mari yakawanda kuti vaone kana zviripo kuti vakumhan'arire.
Mumwe wevasonganiri muhofisi medu akatenga pfuma yake yekutanga mudunhu reWashington. Yakanga iri yekumhanya-pasi 6- yeyunifomu yekuvaka imba. Akashandira contractor kuti azvigadzirise. Asi tarakita-tarakita yakazove nyanzvi yekunyora. Akapinda muhondo yepamutemo yakatora makore mana uye akamutorera $ 4. Dai akangoita chinhu chimwe chete chiri chake muridzi wepasi chivimbo, panzvimbo yezita rake chairo. izvo pamwe zvingadai zvisina kuitika. Asi pachinzvimbo, vapikisi vakaona kuti aive neimba neimba yekudyara, saka vakafunga kumhan'ara.
Nekudaro, yako chivimbo chenyika kuva neyako chivakwa kunogona kukupa kuvanzika kukudzivirira kubva pakurasikirwa nemba yako wega, mota yako, yako bank account uye kuva ne25% yemari yako yeramangwana yakashongedzwa kwemakore anotevera makumi maviri. Zvekare, izvo, zvega, hachisi chinhu chekudzivirira chinhu. Icho chinangwa ndechekudzivirira yako real estate kubva pakuongorora maziso. Panzvimbo pekubata zita rezvivakwa zvako muzita rako kuti vanhu vese vaone, zvinopa chipingamupinyi pakati pako nevaya vasina chavanofarira mupfungwa. Nekudaro, inogona kudzikisa mukana wekuti kumhan'arwa kumhan'ara kwauri.
Chii Chandinofanira Kuita?
Fonera Makambani Akapindirwa kuti ataure nemumiriri. Mushure mekuraira, isu tinokutumira neemail chinongedzo kune yedu yepamhepo nyika trust trust yemibvunzo. Iwe uchazadza iro remibvunzo, iyo inotizivisa isu kana ichinge yapera. Zvinyorwa zvako zvichagadzirirwa. Isu tinogadzira chivimbo chechivimbiso, iri angangoita gumi nemaviri mapeji. Iwe uno chengeta izvi mufaira rako kabhineti kumba kana mune yakachengeteka dhipoziti bhokisi. Isu tinogadzirirawo gwaro rerubatsiro, tichiendesa yako pfuma kubva kuzita rako kuenda kukutenda kwako. Iwe unorekodha gwaro iri muhofisi yekodhi rekodhi mudunhu uko iko iko iko iko iko iko iko iko iko iko iko. Kugoverwa kwerubatsiro rwegwaro rinobatsira, iro rinoendesa iro rinobatsira fuma yako kune kambani, munhu kana mupenyu trust inosanganisirwa.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa munaGunyana 17, 2021